WOWOW Sink Faucet 4 Inch Centre Fangaro menaka manondraka menaka
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Sink fandroana Faucet 4 inch Centre menaka manondraka menaka
naoty 5.00 avy tany 5 mifototra amin'ny 17 mpanjifa naoty
(17 mpanjifa famerenana)
WOWOW faucet 100 isan-jato FAMPIJORANA FAMPISEHANA - ny paompy rehetra izay nandinika tamin'ny alàlan'ny tsindry rano avo be hiantoka ny kalitao sy fiaretana. Efitra fandroana miendrika efitrano 4 miendrika, fametahana varahina avo lenta tsara tarehy vita alohan'ny famolavolana natao ho an'ny Fiainana Contemporary Layout
232120RB torolàlana fametrahana
Ny antsipirian'ny trano fandroana mainty afovoany 2321200RB: Raha mandinika ny vokatra farany izahay, dia aza misalasala hifandray aminay amin'ny vidin'ny vidiny. CENTERSET; Karazan-endrika famoronana faucet misy tsorakazo ary apetrany. Fandroana fandroana miaraka amin'ny HANDLES FAUCET BATHROOM roa: Fitaovana indroa mihetsika dia manitsy ny rano miaraka amin'ny fifehezana ny mari-pana. SANITARY HAMPANGATANA NY FAHATSIAROVANA DRAIN: Fototry ny rano ao anaty efitrano fandroana dia misy fivoriam-pako metaly, rano avy amin'ny fantsom-by amin'ny alàlan'ny fanosehana amin'ny rodobe, misoroka ny fikosehana ny tànanao voasasa. HITANAO OZY FAMPIASANA ZAVATRA FOTSOTRA: roa famoronana grika famolavola grika mahazatra. Miady korosi. Ny fantsom-bidy dia napetraka ny faucet vanity natao ho an'ny trano hofan-trano, condo vaovao, trano tokana, trano tokana, trano fitaterana lalana ary fampiasa an-trano. Azafady mba mifandraisa aminay raha misy fanontaniana.
SKU: 2321200RB Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: faucet mandro, afovoany, efitra fandroana efamira, Volon-tsolika voahosotra menaka
9.2 X 9.1 X 3.9 santimetatra
Io no endrika tiako indrindra. Manana fonosana tsara izy io, tsy misy mangana ny endrika ivelany, ary mora apetraka. Mety ny vidiny.
Afaka nametraka mora foana ny vadiko! Faly be aho noho io fividianana io. Toa lafo dia lafo lavitra noho izy io ary mahazo dera be dia be aho. Mpanjifa malaza ambony s
Tena afa-po amin'ity faucet ity. Rehefa vonoinao ny faucet dia miasa tsara ny andriamby ary afaka mitazona ilay famafazana ao anatiny. Tsy manana fitarainana momba ilay faucet aho.
Sarotra ny mahita faucet dakozia marika tsara izay tsy mihemotra. Vao teo amin'ny herinandro teo vao nampiasa ilay faucet aho ary niasa tsara hatreto.
*** A D2020-06-18
Faucet fandroana tsara kalitao mora apetraka. Nividy azy io ho an'ny mpanova rano amin'ny fitoerako aho izay mifanaraka tsara! Tena tiako ilay izy!
Fametrahana mora ary toa tsara! Mitadiava antsasaky ny vidin'ny zavatra ho hitanao any amin'ireo magazay fanatsarana trano
L *** h2020-07-06
Sarotra ny mikapoka ity faucet ity amin'ny vidiny. Tena faly tamin'ny fividianako.
Tonga haingana kokoa noho ny daty nanaterana azy. Boaty tena tsara. Mora be ny mametraka azy, ary tena mahay. Nosoloako faucet Delta, izay mitentina 4X be ihany, ary ity vaovao ity dia toa tsara kokoa ary mora kokoa ny mametraka azy. Tena talanjona.
Vokatra tena tsara jerena izay mora napetraka. Tsara famaranana ary mandeha tsara.
Kalitao mavesatra, tonga amina fonosana fiarovana tsara. Mahafinaritra ny fivezivezena sy ny hidin'ny lakandrano. Hividy indray ary hametraka azy iray volana eo ho eo.
Vokatra tsara !! Fametrahana mora be. Nampiasaiko izy io hanoloana ny faucet ao amin'ny RV-ko ary tena tsara, mividy bebe kokoa aho hanoloana ireo faucet fandroana ao an-tranoko.
Kalitao tsara, mahatonga ny rano mandeha tsara, mora esorina ny aerator, endrika tsara tarehy. Voamarika fa ny bokotra iray dia malalaka kokoa noho ilay iray hafa. Tokony ho vahaolana mora. Amin'ny ankapobeny, vidiny lafo ho an'ny WOWOW nefa tsy misy diso fanantenana. Mividy tsara!
Faly amin'ny kalitao, ny fijery ary ny fanamorana ny fametrahana… Izay nividy segondra ho an'ny nilentika hafa aho!
Ny rano mandeha / mamono dia marina. Madio sy milamina ny fijery. TIAVO ny tatatra fanosehana! Mora kokoa sy mandaitra kokoa noho ny tatatra fanintona taloha izay nosoloiny!
Ny fametrahana dia tsotra be hany ka nasain'ny zanako 14 taona nanao ny install (miaraka amin'ny fanaraha-masoko mazava ho azy). Tena faly amin'ity fividianana ity.
Tena mifaninana ny vidiny ary tiako ny volavolan-tsivana. Voafono tsara miaraka amin'ny faritra rehetra arovana. Ry mpivarotra, aza manova ny fonosana. asa tsara. tsy azo antoka fa toa mangina kokoa ireo noho ireo faucets farany nananako.
*** S S2020-08-19
Kanto tanteraka! Miasa tsara. Lanjalanja kokoa ary ahatratra lavitra kokoa noho ilay teo aloha. Tonga lafatra amin'ny fangatahako. Famaranana kalitao! Tsy plastika. Andraikitra mavesatra! Tena faly amin'ny fividianako!
J *** f2020-09-01
Ity faucet ity dia avo lenta. Niezaka nividy iray hafa ary lasa daholo izy ireo. Ataoko fa tsy izaho irery no tia an'io.
Nifindra tao an-tranoko vaovao izay nisy rano nilentika maharikoriko. Mora tokoa ny nametrahana azy ary mahavariana!